Ụbọchị My Pet » Olee otú Mkpa Mmekọahụ?
Mary na Ryan *(aha ndị e gbanwere) ndị a di na nwunye na ọtụtụ n'ime ndị enyi ha nweere ya anyaụfụ. Ha abụọ na mahadum na-agụsị akwụkwọ na oké ọrụ. Ọ dịghị ụmụ ma. Ma oké ogige site na mmiri na a isi mepere ebe. Ha bụ ndị ego na ịhụnanya. Onye ọ bụla chere na ha dị nso dị ka ị pụrụ na-abịa “zuru okè di na nwunye”.
Gịnị ka di na nwunye ndị enyi na-amaghị bụ na e a na nzuzo na Mary na Ryan ama-eme ka ụfọdụ nchegbu ná mmekọrịta ha nke 4 afọ. Ha anaghị enwe mmekọahụ.
Ryan akụkọ…”M nnọọ m ịhụnanya na Mary. Ma nanị ihe mere m ji na-adịghị lụrụ ya ma bụ n'ihi na m na-adịghị ma ọ bụ omiiko akpali agụụ maka ya mmekọahụ. M dọtara ya, ma m nwere ike na-ma ọ bụ na-ahapụ-enwe mmekọahụ na ya. M nnọọ ka m na-eche na ya na nnukwu nke a ndibiat ezie. M”Eh eleghị anya gwa Abigel anya.”
Mary akụkọ…”Anyị na-enwe mmekọahụ banyere 4 ugboro n'afọ. M ga-emeghi ịgwa onye ọ bụla na. M maara ya adịghị nkịtị. M pụtara Ryan dị ukwuu otú ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ – Adịghị m na-eche na ọ ga-emetụta anyị tremendously. Ma, mgbe ụfọdụ m na-eche – ọ bụ m? Ọ bụ ya?”
Kwere ya ma ọ bụ – e nwere ọtụtụ di na nwunye dị ka Ryan na Mary na-adịghị enwe mmekọahụ na mgbe niile ma ọ bụ na afọ ojuju nke abụọ ọzọ. Na ọtụtụ n'ime ha ziri ezi eme ihe ọ bụla banyere ya n'ihi na ha adịghị eche na mmekọahụ kwesịrị kọwaa ha na mmekọrịta ha. Ọtụtụ ndị na-adịghị akwadebe agwụ a mmekọrịta dabeere na ọjọọ onwu ma ọ bụ ihe ọjọọ na nkwurịta okwu. Ị ga-?
Ọ bụrụ na akụkọ a na-ada ka ndụ gị — e nwere ihe ụfọdụ dị mkpa ka ị tụlee…
1. Nwere ike ị na-ebi ike nke ndụ gị na-enweghị mgbe enwe mmekọahụ?
2. Olee otú dị mkpa bụ mmekọahụ gị? Olee otú dị mkpa ka o mgbe nile?
3. Ị na-eche na mmekọahụ bụ ihe dị mkpa nke a alụmdi na nwunye ma ọ bụ ogologo-okwu mmekọrịta?
4. Ị hụrụ na ọ dịghị ihe na n'ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ hormonally-ezighị ezi na ma nke ị?
5. Nwere ma nke i nwere ihe ọ bụla ụdị mmekọahụ trauma?
6. Ị lere ya anya na-agwa okwu a mmekọahụ therapist ma ọ bụ ndị ọzọ ndị ọkachamara banyere gị mmekọahụ ndụ?
N'uche nke m, mmekọahụ bụ ihe dị nnọọ mkpa akụrụngwa nke a ogologo- okwu mmekọrịta. Enweghị ya – e nwere a adabaghi ​​na ndị mmadụ ga jupụta na ndị ọzọ mmekọrịta, nri, ịgba chaa chaa, mmanya ma ọ bụ ndị ọzọ na mmekọahụ (internet porn ma ọ bụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị), wdg.
Ọzọ – mmekọahụ bụ a otutu fun na juputara na-atọ ụtọ! Ị gaghị agbaghara si na ihe nwere ike a na-akwụghachi ụgwọ n'ezie akụkụ nke mmekọrịta gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike adịghị ekwurịta okwu banyere gị mmekọahụ ndụ na onye gị na – mgbe ahụ, ị ​​nwere izugbe nkwurịta okwu mmebi oge. Ọ ga-emecha seep n'ime akụkụ ndị ọzọ nke ndụ gị. Get enyemaka dị gị mkpa ugbu a ma ọ bụrụ na ị bụghị kwa kpamkpam nyekwara ma – nwere ike ị chọrọ eri mkpu mgbe ị nwere ike.
Mmechi…Ryan na Mary mechakwara ịlụ di na nwunye na nwere ntakiri mmekọahụ na honiimuunu. Nke ahụ abụghị dabara Meri echiche nke a honiimuunu fantasy, n'ihi ya, ọ mara jijiji ma nyere Ryan ihe ofufe. Agwọ ma ọ bụ mmesa. Ha mere na-enye ọgwụ a na-agbalị ma Ryan chọpụtara na e nwere bụghị ọtụtụ na-arụ ọrụ. Ọ nnọọ bụghị omiiko ezu banyere mmekọahụ ma ọ bụ mmekọahụ na Mary. Ọ bụghị n'aka. O di nwute na Ryan na Mary iche na ugbu a na-na-ekwu banyere ekwe omume nke ịgba alụkwaghịm.